NgoJuni 25, 2021, Inkampani ye-SIBO yaqhuba uqeqesho lwezakhono zokuhlangula kwi-Intanethi kubo bonke abasebenzi. Kolu qeqesho, abasebenzi be-SIBO bafunde izakhono ezisisiseko zokuhlangula ngokukhawuleza kwithiyori ngokubukela iividiyo ngokudibeneyo. Kwelinye icala, kuyathenjwa ukuba abasebenzi banokuzikhusela emsebenzini. Kwelinye icala, le ikwayindlela ebalulekileyo yokuqinisekisa imveliso ekhuselekileyo ye-SIBO.
Emva kwemini kaJuni 25, abasebenzi be-SIBO ngokudibeneyo babeke phantsi umsebenzi wabo, kwaye wonke umsebenzi uzinikele ekufundeni ulwazi lokhathalelo olungxamisekileyo. Ngeli xesha, ngokusebenzisa ikhosi, ulwazi kunye nezakhono zokwazisa ukuhlangulwa kukothuka kombane kunye nokuvuselelwa kwentliziyo, iinkqubo zonyango kunyango lwezehlo, njl. Ukuchazwa ngokuchanekileyo kokuma, imigaqo yokuhlangula, kunye nemilinganiselo yexesha likaxakeka xa kujongene nemeko zikaxakeka ziyacaciswa.
Inkampani ye-SIBO inethemba lokuba wonke umsebenzi angaluthatha nzulu olu qeqesho. Kwaye ngolu qeqesho, abaqeqeshwa kufuneka babenolwazi oluqinileyo lolwazi lokuqala kunye nezakhono ukuze bakhusele ngcono ukhuseleko lwabo kunye nokukhuthaza imveliso ekhuselekileyo kwixa elizayo. Ikwanethemba lokuphucula ukuzikhusela kunye nokukwazi ukuphuncuka kwimeko engxamisekileyo yabo bonke abasebenzi, ukwenza ngcono ukuhlangula kunye nokuhlangula kwimeko yengozi, ukunciphisa ukubandezeleka kwabonzakeleyo, kunye nokulwela ixesha lonyango, ngaloo ndlela ukunciphisa izinga lokukhubazeka, ukunciphisa izinga lokusweleka, kunye nokukhusela abasebenzi ngezona zinga liphezulu. Ubomi kunye nempilo.
Ngolu qeqesho, wonke umsebenzi we-SIBO usebenze kakuhle izinto ezithile zoncedo lokuqala. Kumsebenzi wexesha elizayo kunye nobomi, abasebenzi be-SIBO banokusebenzisa ulwazi loncedo lokuqala kunye nezakhono ezifundiweyo zokuzihlangula kunye nokuhlangula kunye. Kwinyathelo elilandelayo, inkampani iya kuqhubeka nokonyusa uqeqesho lokuhlangula ngexesha likaxakeka, ukuphucula ngokufanelekileyo ukuzinceda kunye nokuhlangulwa kwabasebenzi, kunye nokwenza imeko yokusebenza ehambelanayo nekhuselekileyo. Kwangelo xesha, siya kubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezingcono kwindawo ekhuselekileyo yokusebenza.